Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Krizy COVID any Vatican
Noho ny fihenan'ny COVID-19 dia nanapaka ny karaman'ny kardinaly ny Papa, ary nosakanana ny fitifirana zokiny nanomboka ny 1 aprily.
Mba hiarovana ny asa misy ankehitriny dia nanapa-kevitra ny Papa fa tsy maintsy hesahina ny karaman'ny kardinaly 10% ary koa ireo ambaratonga ambony sy mpiangona.
Hisy sakana fitifirana indroa mandavantaona manomboka ny 1 aprily 2021 ka hatramin'ny 31 martsa 2023, ho an'ny mpiasa rehetra miasa ao amin'ny Holy See, Governorate, ary ireo rantsam-panjakana hafa mifandraika amin'izany.
Mitombo ny fahantrana any Italia noho ny COVID, fa ny fanampiana avy amin'ny fiangonana dia mitombo ihany koa na eo aza ny olana ara-bola.
Ny Papa Bergoglio miaraka amina motu proprio (amin'ny fandraisana andraikitra manokana) dia nitahiry ny fandaniana ho an'ny mpiasan'ny Holy See, ny Governemanta ao amin'ny Vatican City State sy ireo sampana hafa mifandraika amin'izany noho ny krizy ara-bola, nohamafisin'ny areti-mandringana.
"Rehefa heverina fa ilaina ny hirosoana arakaraka ny mason'ny fitoviana sy ny fandrosoana" ary ny "hiarovana ireo asa ankehitriny," dia tapaka fa ny fanapahana ny karama izay hisy fiatraikany amin'ny kardinaly hatramin'ny 10% ary koa ireo ambaratonga ambony sy mpiangona hafa dia mila tanterahana. Ho an'ireo olo-malaza ara-pivavahana ireo, ny Papa dia nampiato ny fitifirana zokiny hatramin'ny taona 2023 (afa-tsy ny mpiasa laika hatrany amin'ny ambaratonga voalohany ka hatramin'ny fahatelo).
"Ny ho avy maharitra ara-toekarena ankehitriny dia mitaky, ankoatry ny fanapahan-kevitra hafa, mba handraisana fepetra mikasika ny karaman'ny mpiasa," hoy i Bergoglio nanoratra tao amin'ny motu proprio. Tsy te-hiala ny Papa fa mila fehezina ny fandaniana. Noho izany dia tapaka ny fanapahan-kevitra hiditra an-tsehatra “arakaraka ny marimaritra iraisana sy ny fandrosoana” miaraka amin'ny fanitsiana sasany izay mahaliana indrindra ireo mpitondra fivavahana sy ireo mpivavaka amin'ny ambaratonga avo indrindra.
Ity famoretana ara-bola ity dia natosiky ny “fatiantoka izay nampiavaka ny fitantanana ara-toekarena ny Holy See nandritra ny taona maro” sy ny toe-javatra nateraky ny areti-mifindra, “izay nisy fiatraikany ratsy tamin'ny loharanom-bola rehetra tao amin'ny Holy See sy ny Vatican City Fanjakana. ”
Mamaky an'i Dante ao amin'ny Quirinale i Benigni